i-vane air motor, i-motor pneumatic motor, i-10 hp pneumatic motor
i-vane air motor, i-10 hp pneumatic motorationationation
I-Air Motors - I-Pneumatic Motors
I-air motor (i-pneumatic motor) noma injini yomoya ecindezelwe uhlobo lwenjini elenza umsebenzi womshini ngokwandisa umoya ocindezelweyo. Ama-air motors asebenzisa amandla aphephile, athembekile omoya ominyene ukukhiqiza i-torque nokunyakaza okujikelezayo. Imiklamo ehlukahlukene iyatholakala. Ungathola ukucaciswa kwemoto yomoya lapha futhi singakunikeza imishini yomoya esebenza kahle kakhulu, 10 hp motor womoya noma
i-am425 air motor, noma i-vane air motor
Asebenza kanjani ama-motor motors?
Ukusebenza kwemoto yomoya kuncike ekucindezelweni okungenayo. Ekucindezelweni okungapheli, ama-motor motors abonisa ubudlelwane bokukhipha u-torque / ijubane. Kodwa-ke, ngokulawula nje ukuthunyelwa komoya, kusetshenziswa amasu we-throttling noma we-regulation regulation, ukuphuma kwemoto yomoya kungashintshwa kalula.
Kusho ukuthini ukusebenzisa i-air motor ohlelweni lwe-pneumatic?
I-pneumatic motor ifinyelela ukusebenza kwayo okukhulu futhi yandise impilo yezakhi ezenza umsebenzi ohlelweni lwe-pneumatic lapho isebenza eduze kwesivinini sayo esilinganisiwe (i-50% yesivinini esilinganiselwe esingenamsebenzi). Ibhalansi yamandla ihamba phambili kule ndawo, ngoba umoya ocindezelwe usetshenziswa kahle.
Ingabe le modeli inama-piston? Impela, amamodeli wethu ajwayelekile anama-piston. wenza amanye amamodeli ama-air motors? ngokwesibonelo ngepiki esikhundleni sama-piston?
Yebo, lokhu kungabanjwa.Ngemodeli ye-vane noma ye-piston eyehlise isivinini esikhulu se-shaft semoto.
Isimo se-pneumatic motor
Imoto ezosetshenziswa kufanele ikhethwe ngokuqala ngethoshi elidingekayo ngejubane elithile le-spindle. Ngamanye amagama, ukukhetha imoto efanele, kufanele wazi ijubane ne-torque edingekayo. Njengoba amandla amakhulu efinyelela engxenyeni yejubane lamahhala wemoto, imoto kufanele ikhethwe ukuze iphuzu okuhloswe ngalo lisondele kakhulu kumandla amakhulu wemoto.